China Umsizi wodongwe uMvelisi kunye noMthengisi | Jinglong
I-graphite yodongwe ekroliweyo inoluhlu olupheleleyo lweenkcukacha ukusuka kwi-1 # ukuya kwi-1500 #. Yenziwe ngezinto ezisemgangathweni ezikumgangatho ophezulu kunye nefomula ekumgangatho ophezulu, igrafayithi yodongwe olubunjiweyo inezibonelelo zokuxinana okuphezulu, ukumelana nomhlwa, ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu, ukuqhuba okukhawulezayo, ukuxhathisa okunamandla okomeleleyo, ukuxhathisa ukothuka okukhulu, ukusebenza kweekhemikhali okuzinzileyo, imilo entle, ukuhlala ixesha elide njl.
Ngomgangatho wayo ozinzileyo nothembekileyo, iyonwabela intengiso elungileyo ngalo lonke ixesha. Yinqanawa eyimfuneko yokuphosa kunye nokuphosa isinyithi. Ngaxeshanye ukuxhasa ukuveliswa grafayithi ityhubhu, iphedi grafayithi kunye nezinye iimveliso, kunye nokuveliswa iimveliso ezimilise grafayithi ezikhethekileyo ezimiselweyo ngokweemfuno ezahlukeneyo requir.
Umba Ipharamitha esemgangathweni Vavanya idatha
Ukutsala kwakhona 1630 ℃ 1635 ℃
Umxholo weCarbon ≥ 38% 41.46%
Ukuqaqamba okubalulekileyo 35% 32%
Ukuxinana kobuninzi ≥ 1.6g / cm³ 1.71g / cm³
Grafayithi Clay Crucible * Ukucaciswa
Ukucaciswa (D) Ububanzi obungaphandle obuphezulu (H) Ukuphakama ngokubanzi (d) Isiseko esingaphandle seDayamitha
Ishumi elinambini #
Qaphela: La maxabiso angentla asetyenziselwa kuphela, ubungakanani bemveliso buya koyisa, kwaye i-crucible ekhethekileyo emiselweyo iyafumaneka.
Amanqaku okusebenza kweecrafite zecrafti
1. Iziko le-crucible kufuneka ligcinwe kwimeko eyomileyo
2. Yithwale ngokulula le mbambo
3. Ukufudumeza i-crucible kumatshini wokomisa okanye kufutshane neziko. Iqondo lobushushu kufuneka lifike kuma-500 ℃.
4. Iziko kufuneka lifakwe ezantsi kwinyanga yomlilo.
5. Xa ufaka isinyithi kwi-crucible, kuya kufuneka uthathe amandla e-crucible njengereferensi yakho. Ukuba i-crucible igcwele kakhulu, iya konakaliswa lulwandiso.
6. Imilo yamasango imfuneko njengoko leyo ngokuyinyibilikisa. Kuphephe ukugxila okuxinzelelekileyo ekutshabalaliseni i-crucible.
7. Coca i-crucible rhoqo kwaye ulula.
8. I-crucible kufuneka ibekwe embindini wesithando somlilo kwaye ishiye umgama phakathi kwe-crucible kunye neziko.
9. Jika i-crucible kube kanye ngeveki enye kwaye oku kuya kunceda ukwandisa ubomi benkonzo.
10. Idangatye akufuneki lichukumise ngokuyinyibilikisa ngokuthe ngqo.
11.Ukusetyenziswa rhoqo kweeyure ezingama-24 kuya kwenza ukuba iziphambano zibe nobomi benkonzo ende.
Egqithileyo UHP Electrode
Okulandelayo: Pyrolytic grafayithi Iziko